ငါ asexual လား - Brain On Porn - porn မှထွက်ရှာရန်ထွက်ရှာပါ
သငျသညျ porn အမျိုးမျိုးတို့ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်လာပြီအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအပေါ်ကြီးပြင်းခဲ့လျှင် မျက်နှာပြင်လိင်အပေါ်ချိတ်ဆက်၊ သင်သည်တကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်များစွာတုံ့ပြန်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤသည်အကြီးအကျယ်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ အင်တာနက်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွန့်ပစ်သူများသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေသူတို့၏ပုံမှန်ဆွဲဆောင်မှုကိုပြန်လာလေ့ရှိသည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်၊ သင်ဟာ porn ကနေလအနည်းငယ်အထိချိတ်ဆက်မထားမချင်း“ asexual” လို့မယူဆပါနဲ့။ ယနေ့ညစ်ညမ်းရုပ်သည်အလွန်အစွမ်းထက်။ လိင်ဆက်ဆံသူများအတွက်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုလျော့နည်းစေသည် (သက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှု - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအကြားလိင်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း: တစ် ဦး In-Depth Exploration, 2017).
2020 ၏အဖြစ်, ကျော်ရှိပါတယ် လိင်မှုကိစ္စပြတ်လပ်မှုများနှင့်လိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း၊။ လေ့လာမှုများအပြင် ဤစာမျက်နှာတွင်ကျွမ်းကျင်သူ ၁၅၀ ကျော်ပါဝင်သည့်ဆောင်းပါးများနှင့်အင်တာဗျူးများပါ ၀ င်သည် အသိအမှတျပွုနှင့်အောင်မြင်စွာ porn-သွေးဆောင် ED နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံးကုသကြသူ (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ။
ထို့အပြင် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှ စ၍ ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများအားလိင်မှုကိစ္စကိုအကဲဖြတ်သည့်လေ့လာမှုများတွင်သမိုင်းဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအဆင့်များနှင့်အသစ်သောဘေးဒဏ် - အံ့ lib ဖွယ်ကောင်းသည့်နှုန်းများကိုဖော်ပြထားသည်။ ဒီ Lay ဆောင်းပါးထဲမှာမှတ်တမ်းတင် နှင့်7အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များပါဝင်သောဒီ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူအတွက် - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016)
သမိုင်းဆိုင်ရာ ED နှုန်းထားများ: အခါ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပထမဦးဆုံး 1940s အတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့သည် Kinsey အစီရင်ခံစာနိဂုံးချုပ် ပညာရေး၏ပျံ့နှံ့သူတို့အား 1-30 အတွက် 3% ထက်လျော့နည်း 30 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ငယ်ယောက်ျားအတွက် 45% ထက်လျော့နည်းခဲ့ပါတယ်။ လုလင်တို့သည်ပေါ် ED လေ့လာမှုများ, ဒီ 2002 အတော်လေးကျဲနေမြဲနေစဉ်6အရည်အသွေးမြင့်ပညာရေးလေ့လာမှု Meta-analysis သည် အဆိုပါ5၏6ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 40% ၏2အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့အ ED နှုန်းထားများအစီရင်ခံဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ 6th လေ့လာမှု 7-9% ၏ကိန်းဂဏန်းများကဖော်ပြခဲ့သည်ပေမယ့်အသုံးပြုတဲ့မေးခှနျးကို5သည်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်မရနိုင်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ရန်ဘူး ရှည်ကြာသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: "သင်သည်အမှုရောက်သောတစ်ခုစိုက်ထူထိန်းသိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ရရှိခဲ့ ဘယ်အချိန်မဆို ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်? "။
2010 ကတည်းကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဆယ်ပါးလေ့လာမှုများ erectile အလုပ်မဖြစ်အတွက်ကြီးမားတဲ့မြင့်တက်ထုတ်ဖေါ်။ အနိမ့်လိင်စိတ်များအတွက်နှုန်းထားများ 10% ကနေ 40% အရွယ်ရှိနေစဉ် 14 လေ့လာမှုများမှာတော့ 37 အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့အ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်း, 16% ကနေ 37% မရသေးသည်လည်းရှိသည်။ နုပျို ED နှင့်ဆက်စပ်သောအဘယ်သူမျှမ variable ကိုကြေးဇူးတငျကွောငျးကနောက်ဆုံး 2006-10 နှစ်များတွင်ပြောင်းလဲသွားပြီ streaming porn (20) ၏ထွန်းကားထက်အခြား (ဆေးလိပ်သောက်နှုန်းကိုချဖြစ်ကြသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု 20 ကတည်းကတက်သာ 40%, အထီး 4-1999 အတွက်အဝလွန်နှုန်းတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါသည် - စာပေ၏ဤသုံးသပ်ချက်ကိုကြည့်ရှု) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်မကြာသေးမီခုန်မြောက်မြားစွာ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်လေ့လာမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှနိမ့် arousal ဖို့ "porn စွဲ" ၏ထုတ်ဝေရန်နှင့်တိုက်ဆိုင်။
ဒီနေရာမှာ Self- အစီရင်ခံစာများအနည်းငယ်ရှိပါတယ်:
ငါ nofap စတင်ခင်မှာ, အစဉ်မပြတ်ငါငါ့ကိုလှည့်ပတ်မိန်းကလေးငယ်များမှာရှာဖွေနေအောက်မေ့အထင်ကြီးခံရဘူး။ တောင်မှအများဆုံးသမားရိုးကျပူသူတွေကိုငါ့ကိုထွက်မှီဝဲကြောင်းအားနည်းချက်တွေကိုခဲ့, ငါဘယ်သူမှငါ့ကိုမဖွင့်သို့မဟုတ်ပင်ကျွန်ုပ်အာရုံကိုဖမ်းမယ်လို့ရှိရာအမှတ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ငါ asexual ခဲ့ကြောင်းစဉ်းစားရန်အစနှင့်အဖွင့်ဘယ်သူ့ကိုမှရန်ဆွဲဆောင်မခံခဲ့ရပါဘူး။
ထိုအခါ nofap ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီး၊ နှစ်များတစ်လျှောက်ထောင်ပေါင်းများစွာသောထောင်ပေါင်းများစွာသောထောင်နှင့်ချီသောဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏လှပမှုနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိမှုကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုသဘောပေါက်လာသည်။ နှစ်ပတ်ကြာရင် nofap မှာဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကျွန်တော့်ဝန်းကျင်မှာရုတ်တရက်ပိုပူလာတယ်။ သို့သော်ယင်း၏ငါ့ကိုပြောင်းလဲသွားရဲ့။ ယောက်ျားတွေ၊ fap အတွက်မထိုက်တန်ဘူး။ စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်တွေကိုစုစည်းထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစစ်အမှန်လူတွေကိုမရေတွက်ပါနဲ့။ သူတို့ကမင်းကိုပြန်ပြီးချစ်နိုင်မှာပါ။ ငါ asexual ခဲ့သည်ထင်။
ဒီရက်ငါတကယ်များစွာသောမိန်းမလှပသောရှာပါ။ ငါတော့ဘူးမစုံလင်မှုကိုဂရုမစိုကျဘူး။ ၎င်း၏အံ့သြဖွယ်။
ငါအရုပ်ဆိုးအမြိုးသမီးမြားကဝိုငျးသူဖြစ်ကြောင်းကိုငါ၏အကြမ္မာ / Karma ကျိန်ဆဲခဲ့ပါတယ် nofap မီ, သူတို့ကိုငါ objectifying ခဲ့ပါတယ်, ငါအရမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကို objectify လေ့ရှိတယ်။ NoFap ဤမျှလောက်များစွာသောနည်းလမ်းတွေအတွက်ငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်။
ယနေ့ငါ nofap မတိုင်မီလုံးဝထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်လို့ထားတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးတို့ကချိတ်ဆက်တယ် အုမဲ့ ဒါပေမယ့်သူမလှပ, ငါသည်သူမတို့သည်ကြီးစွာသောလူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်သူမ၏မျက်စိကြိုက်တယ်။ ငါမရှိတော့ bodyparts ကိုရှာနေပါတယ်, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဤသည်နေ့ရက်ကာလကိုငါ့ထံသို့တွေအများကြီးကိုဆိုလိုသည်! permalink
မင်းငါ့ကိုလူအကြောင်းပြောပြတယ် ... ငါအဆိုးဆုံးကတော့ကိုယ့်ဟာလိင်တူဆက်ဆံသူလို့ငါမသေချာတော့ဘူးလား !! permalink
porn ငါ့ကိုကို virtual လိင်နီးပါးလုံးဝ asexual အပြင်ဘက်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ အကြှနျုပျ၏လိင်မျက်နှာပြင်ကိုတိုက်ရိုက်ချည်ထားဖြစ်လာသည်။
ငါတကယ်အစစ်အမှန်အသက်တာ၌အမျိုးသမီးတစ်ဦးအပြီးတပ်မက်နောက်ဆုံးသောကာလမအောက်မေ့နိုင်ပါ။ ငါအချို့သောမိန်းမတို့သည်ဆွဲဆောင်မှုကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကကျော်လွန်သွားဘူး။
ကျွန်မဆက်ဆံရေးလိုက်စားရပ်တန့်ခဲ့ကြ, ငါမရှိတော့အစစ်အမှန်လိင်ဂရုစိုက်။ ငါဆဲကညာဖြစ်၏, ထိုသို့ပင်ငါ့ကိုနှောင့်အယှက်မပေးပါဘူး။ ငါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီးများအတွက်အလိုဆန္ဒဆုံးရှုံးသွားပါပြီ။
မိန်းကလေး (သို့) အထွေထွေကလူတွေကငါ့ကိုဆွဲဆောင်မယ်ဆိုရင်ငါဂရုမစိုက်ဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်ရဲ့အာရုံစိုက်မှုကကျွန်တော့်ကိုစိတ်မ ၀ င်စားတဲ့အတွက်အခုငါ့အတွက်တိုးတက်မှုမှန်သမျှကိုငါချပစ်လိုက်တယ်။
အဆိုးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုငါလုံးဝပုံမှန်ဒီရှိသည်ဖြစ်သည်။ ဒါကပဲကျွန်မအသက်တာသည်, ဘာမျှပြောင်းလဲလျှင်, အဲဒါကိုသည်အဘယ်အရာသည်။ porn စာသားငါ၏အဦးနှောက်ပျက်စီးခဲ့သည်။
Fapping ငါ့ကိုနီးပါး asexual ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ
ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေမိန်းမတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကိုရှောင်ကြဉ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုမရှိဘူးဆိုတာသိလို့ကျွန်မလိင်တူချစ်သူလို့ထင်ရမယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ ငရဲသည်ငါ့ကိုတောင်မလှည့်ပါ။ ယနေ့ခေတ်တွင်အရူးအမူးစွဲကပ်ရန်အရူးအမူးစွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ shit ကိုငါမြင်ယောင်ရမည်။ သငျသညျယောက်ျားတွေ fapping ငါ့ကိုကုသလိမ့်မည်ဟုထင်ကြသလား လိင်စိတ်ပြန်ကောင်းလာခြင်းနှင့် vanilla လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်ကြောင်းသင်သတိပြုမိပါသလား။
Guy4[230 ရက်ပေါင်း]:
ငါ porn ကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကကြည့်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒါကငါ့ရဲ့လိင်ကိုလုံးဝသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီ။ အဲဒါမရှိရင်ငါဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ asexual ပါ။ ငါ "reboot" လုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအော်ဂဇင်ကိုမလိုချင်ဘူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်အသစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ချင်တယ်၊ မိန်းမတစ်ယောက်ကတကယ့်မိန်းမတွေအလယ်မှာရှိပြီးညစ်ညမ်းမှုကိုလုံးဝဖယ်ရှားပစ်ချင်တယ်။
အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် ကျွန်ုပ်၏အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆွဲဆောင်မှုသည်ယခင်ကတစ်ခါမျှမရောက်ဖူးသောအဆင့်များအထိမြင့်မားလာသည်။ ငါ၏ဂုဏ်အသရေကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ပြီးအားရ ၀ မ်းသာစွာဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအမျိုးသမီးများအတွက်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်လိင်မှုကိစ္စကိုလွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိသောအခါသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမိသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်စဉ်းစားနေသောအစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများသည်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာထိုင်ပြီးမျက်နှာပြင်ကိုမကြည့်ဘဲနေနေကြသည်။
ရိုးရိုး HOCD (HOCDers သို့ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံနှင့်အကြံဥာဏ်)
ငါ PMO သို့အလွန်အမင်းစတင်မှီတိုင်အောင်ငါမည်သူမဆိုသို့မဟုတ်လိင်လူတစ် ဦး ကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ကျွန်တော့်ပထမဆုံးလိင်တူချစ်သူကို ၁၈-၁၉ လောက်မှာစဉ်းစားမိပြီး၊ အဲဒီနောက် ၇ နှစ်ကြာတဲ့အထိစွဲလမ်းခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်ငါကလိင်တူဆက်ဆံသူလို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ပြီးတော့လိင်တူချင်းဆက်ဆံသူ၊ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မျှအထိ ၁၀၀% လိင်တူချစ်သူ၊ လွန်ခဲ့သောစုံတွဲတစ်တွဲသည်အထိ bi တက်နေဆဲ! HOCD သည်အစစ်အမှန်ဖြစ်ပြီးဤ PMO အားလုံးသည်သင်၏ ဦး နှောက်ဓာတုဗေဒနှင့်ရှုပ်ထွေးနေသည်။ တိုက်ခိုက်ကြ။ ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့လပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်နှစ်များကြာနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။
၎င်းသည်မထင်မှတ်သောဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (သို့) ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းအပေါ်ညစ်ညမ်းမှုမည်မျှညစ်ညမ်းမည်ကိုညစ်ညမ်းစေသည့်ပုံသဏ္howာန်မည်မျှထူးခြားသနည်း။ ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါဟာတကယ့်ကိုထူးဆန်းတဲ့သီးခြားအတွေ့အကြုံထက်ငါ့လိုချင်တာကိုရှာဖွေခြင်း၊ နောက်တစ်နေ့တွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်လုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး ၏ AMA တစ်ခုရှိပြီးသူကပေးထားသော link ကိုအရူးတစ်ယောက်လိုနှိပ်လိုက်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါအဲဒီကိုရောက်တော့သွေးဆောင်မှုကန ဦး ခံစားချက်တွေကချက်ချင်းပဲ“ မင်္ဂလာပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!” လို့ပြောင်းလိုက်တယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြစ်ခြင်း၏ 126 ရက်ပေါင်း
အခြေအနေတွေကကောင်းနေပြီ။ ငါစိတ်ဓာတ်မကျတော့ဘူး။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အခက်ခဲဆုံးအရာများဖြစ်ပြီး၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းမှာအလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်သည်။ စိတ်ဓာတ်ကျပြီးနေ့တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလေးစားမှုတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏ခြေထောက်များသည်မြေပြင်ပေါ်တွင်တည်ငြိမ်နေသည်ဟုခံစားမိသည်။
စိတ်ကျရောဂါကတည်းက hornyness fucking အကြောင်း, သူကပြောတယ်ငါတော့ဘူးငါ့အသက်ကိုမလေးနက်ပြဿနာများရှိသည်သွားပြီ, ဒါပေမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလှိုင်းတံပိုးကြွလာ။ တခါတရံမှာရှိသမျှတို့ကိုငါမှာအဘယ်သူမျှမ hornyness ရှိသည်နှင့်ငါ asexual ဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ပေမယ့်အဲဒီနောက်ကဆူနာမီကွာငါ့အလိုရှိသမျှရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတှေးအမှုတ်နှင့်အမျိုးသမီးအကြောင်းကိုစဉ်းစားငါ့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်တူလာသည်။ ထိုအခါဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို hornyness တကယ်မကောင်းတဲ့နေသောအိပ်မက်မှဦးဆောင်: ငါ porn အကြောင်းကိုအိပ်မက်မက်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ငါ၏အအိပ်မက်အဖြစ်မှန်နဲ့တူခံစားကြရသည်။ ငါနိုးထတဲ့အခါမှာငါနေ့၏ကျန်များအတွက်မကောင်းတဲ့ခံစားချက်အတွက်ဖြစ်ကြောင်းကို, ငါကယ့်အိပ်မက်ခဲ့တာကိုသိရလျှင်ပင်ငါပြန်ရောက်သွားတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်။
ထိုအရာကကျွန်ုပ်၏ဘဝတွင်မတည်ငြိမ်သောတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ခံစားချက်ကအပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်ထားတယ်။ ငါတိုက်တွန်းမှုတိုက်ဖျက်ရေးများအတွက်ကောင်းသောနည်းလမ်းအကြံပြုသောသော fapstronaut ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ အဲဒီနာမည်ကဘာလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာနည်းလမ်းလား။ ငါမသိတော့ဘူး၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်တစ်ခုခုကိုတွန်းအားပေးသည့်အခါညစ်ညမ်းမှု၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်အစာမရှိသောအစားအစာတစ်ခုသို့မဟုတ်ချောကလက်တစ်ချပ်လားဆိုတာကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှင်းပြပြီး၎င်းရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုစဉ်းစားပါ။ ဥပမာ၊ သင် porn အကြောင်းစဉ်းစားသောအခါမိန်းကလေးနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၊
ကျွနု်ပ်၏ pmo / ed သည်အလွန်ဆိုးရွားပြီး၊ အွန်လိုင်းပေါ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုဏ်သိက္ခာကျအောင်လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြမှုတွေကြောင့်ငါဟာစစ်မှန်တဲ့ဘဝမှာမိန်းမတွေကိုဘယ်တော့မှဆွဲဆောင်မခံရဘူး။ စစ်မှန်တဲ့မိန်းမတွေကိုငါမစွဲလမ်းခဲ့ရင်ငါဟာငရဲကလေးတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်။ ထို့နောက်တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးတစ်နေ့တွင်ကျွန်တော်နိုးလာပြီး၊ ပြောင်းလဲရန်မလိုတော့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဘဝတွင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး လိုအပ်သည်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုချစ်မြတ်နိုးရန်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိစေရန်၊ တစ်စုံတစ် ဦး အတွက်အထူးတစ်စုံတစ် ဦး ဖြစ်လို။ ကျွန်ုပ်အတွက်သူမအတွက်ဖြစ်သည်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးငါ SO ကိုတွေ့ခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါအရင်ကထက်ပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်။
ငါ Asexual စေခြင်းငှါစဉ်းစားပါရန်အသုံးပြု
သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်ညက NoFap ၏ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေတစ် ဦး ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန္ဒရှိသည်။ သူမသည်လှပသော၊ ဒါတောင်မှလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုပ်ကိုင်ထားတာနဲ့အတူတူစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းကကျွန်တော့်ဘဝကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် - တခန်းထဲရှိတစ်ယောက်ယောက်ကိုလိုချင်စေခဲ့တယ်။ ငါ horny ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်။ ရုံ horny မဟုတ်ခဲ့, ငါသူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုသိရန်နှင့်သူမ၏နှစ်သက်ဖို့ချင်တယ်။ Porn ကလိင်၏အမြင်အာရုံရှုထောင့်ကိုဆွဲဆောင်ရန်သင်ကြားပေးခဲ့သည်၊ သို့သော်ယခုငါကထိတွေ့မှုနှင့်ရင်းနှီးမှုအတွက်တောင့်တလိုသည့်ခံစားချက်ကိုယခုငါသိပြီ။ ငါဒီခံစားမှုကိုဆက်ရှိနေစေချင်တယ်။ ငါနဲ့ဘယ်သူလဲ?!
အသက် ၂၂ - ED ပျောက်ကင်းသွားသည်: ငါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အလုပ်မဖြစ်ဘူး၊ လူ့အလဟ waste စွန့်ပစ်ပစ္စည်းလို့ထင်ခဲ့ဖူးတယ်။
ငါမှတ်မိနေသမျှကာလပတ်လုံး asexual ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ ပြီးတော့အစဉ်အလာအရသဘောအရမိန်းကလေးတွေကိုတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး၊ တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတာကလက်တွေ့မကျတဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့ကျွန်မနှစ်သက်တဲ့အရာကိုရှာဖွေဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။
အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံသဏ္ာန်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုက်ခဲ့သည် (လိင်ဆက်ဆံခြင်းလွန်ကဲခြင်း၊ မီဒီယာမှတစ်ဆင့်တင်ပြသောအလွန်စုံလင်သောဗားရှင်းများကြောင့်) ဒါပေမယ့်လူတွေဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ရှုထောင့်တွေကကျွန်မကိုဘယ်တော့မှဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိ။ ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာအဝတ်အထည်တွေမတွေ့ရသေးတဲ့အရာမှန်သမျှကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကြည့်နိုင်ဘူး။ အားလုံးအရမ်းကြိုက်ပါတယ်
ငါသည်လည်းဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့, ဒါမှမဟုတ်မည်သူမဆိုအပေါ်တစ်ဦးအရူးအမူးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အမြဲ DeviantArt သရုပ်ဖော်ပုံများနှင့် Google Image ကိုရလဒ်များဒါဟာခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်တော့မှမအစစ်အမှန်မည်သူမဆို။ ဘယ်တော့မှမတကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်။
ယခုတွင်ငါသည်ငါ၏ပထမဦးဆုံးအနုပညာရှင်အရူးအမူး, Pihla Viitala ရှိသည်။ ငါအမျိုးသမီးတွေန်းကျင်ငယ်မသိမသာကွဲပြားအတွေးအခေါ်များကိုခံစားဖို့စတင်တာနဲ့ကျွန်မညင်ညင်သာသာနှုတ်ခမ်းအပေါ်တစ်စုံတစ်ဦးနမ်းခြင်းနှင့်နီးစပ်သူတို့ကိုကိုင်ထား၏အတွေးအခေါ်များနှင့် ပတ်သက်. ချစ်ဖွယ်စဉ်းစားစတင်နေပြီပါတယ်။
ဒါဟာငါ့ထံသို့လိုက်တယ်ပါပဲ။ ဤရွေ့ကားငါပင်မပြုမီထည့်သွင်းစဉ်းစားကြမှာမဟုတ်ဘူးအရာဖြစ်ကြ၏, ဒါပေမယ့်ယခုငါရယ်ကြောင့် 1 /290 နေ့ရက်များမှလမ်းတစ်ခုကိုငါရုတ်တရက်ဆက်ဆံရေးအတွက်ပုံမှန်သဘောပေါက်တယ်, လိင်နှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားတူ၏။ ကျွန်မရုတ်တရက်အခြားသူများကိုလူမြင်သောအရာတို့ကိုခံစားရန်အစပေါ့။ ဒါဟာအနာရောဂါငြိမ်းစရာ၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုဖွင့်, ငါကဖြစ်ပျက်ကိုစောင့်ကြည့်ခံရဖို့ထိုးယပ်ခတ်နေပါတယ်။
, ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံ yeah ", အစ်ကိုဟုဆိုလိမ့်မည်သူများပါ! ကတက်သိမ်းဆည်းထားပါ! "ငါအောက်တိုဘာလ 90th အပေါ် 15 နေ့အမှတ်အသားအတိတ်နှင့်ဇန်နဝါရီလ 180th အပေါ် 13 နေ့အမှတ်အသားအတိတ်ဆက်လက်အပေါ်စီစဉ်ထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ငရဲပြန်လှည့်ကဘာလဲဆိုတာမလဲ
(၃၁) နှစ် - PIED / asexual: လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ကျော်ကမှစတင်ခဲ့သည်။ ယခုပျော်ရွှင်စွာလက်ထပ်လိုက်ပြီ
ကျနော်တို့ asexual ပါသလား? ကျနော်တို့ asexual ဖြစ်နိုင်သလား?
သငျသညျယောက်ျားတွေ asexual ခံစားရပါသလား ငါတူညီတဲ့လှေထဲမှာကျိန်းသေဖြစ်ခဲ့တာနှစ်အတော်ကြာပါပြီ။ ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိမိန်းကလေးများသည်ကျွန်ုပ်၏စံနှုန်းများနှင့်မကိုက်ညီကြောင်းကျွန်ုပ်ထင်နေဆဲဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်ရေဘဝကိုဖြောင့်မတ်စေပြီးကျွန်ုပ်နှင့်မကြာခဏစကားပြောသောအခြားယောက်ျားများကိုတိုက်မိသည့်မိန်းကလေးများအပေါ်သို့ရောက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ မေးခွန်းအနည်းငယ်။ သင်၏ "သဘာဝ" မျက်လုံးများသည်သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသဘာဝ၊ တကယ့်နေ့စဉ်ဘ ၀ ၏လှပမှုကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းစဖွင့်ချိန် ၁၄ ရက်ရှိသလော။ မင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပုံမှန်လား။
ငါ့အတွက် (၇ ရက်) ကြာပြီ။ အခုကျွန်မပတ် ၀ န်းကျင်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အလှအပကိုအမှန်တကယ်ထက်ကျော်လွန်အောင်မြှင့်တင်ပေးနိုင်တော့မှာကိုစိုးရိမ်မိပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေပြီးပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုးဆုံးကတော့ porn မိန်းကလေးတွေကကာတွန်းတွေမဟုတ်သလို 7D ကာတွန်းတွေမဟုတ်ကြဘူး။ Porn မိန်းကလေးများသည်မိန်းကလေးများမဟုတ်ပါလား။ ကျွန်ုပ်တို့သူတို့ကိုဘယ်တော့မှတွေ့မည်မဟုတ်သော်လည်း၊ webcam နှင့်အခြားနည်းပညာများဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ညစ်ညမ်းသောကြယ်များမဟုတ်သကဲ့သို့ caked-porn ကြယ်များလည်းမဟုတ်ပါ။
NoFap နောက်ကွယ်မှအကြှနျုပျ၏လှုံ့ဆျောမှုမိန်းကလေးငယ်များရဖို့ဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာတကယ်မိန်းကလေးငယ်များချင်ဖို့ပဲ။
ဒါနဲ့ငါ PMOing နေတုန်းမိန်းကလေးတွေကိုအရမ်းကြောက်တယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်မကြိုးစားချင်ဘူး။ ကျွန်မအထီးကျန်မှုကိုအရမ်းတန်ဖိုးထားခဲ့တယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဖို့ဆိုတာအဓိကရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါ NoFap ကိုသွားတာနဲ့ချက်ချင်းပဲငါအရင်ကကြိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့မိန်းကလေးတွေအများကြီးကိုစတင်တွေ့မြင်ခဲ့တယ်။
“ စစ်မှန်သော” အမျိုးသမီးများကိုဆွဲဆောင်ခြင်းသည်စတင်လာသည်။
ခဏလေးပြန်မေးတဲ့အခါ Anime / Hentai ကိုသုံးပြီးဘယ်လောက်ကြာကြာ reboot လုပ်ရမလဲလို့မေးခဲ့တယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်တကယ့်ဘဝအမျိုးသမီးများအတွက်ထုံထိုင်းသွားသည်။ ငါ ၄၆ ရက်နေပြီ။ အခုအံ့သြစရာတစ်ခုဖြစ်ပျက်လာတယ်။ ဒီနေ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ထားတဲ့လှပတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုငါတွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒါကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ငါ reboot စလုပ်နေပြီနဲ့တူတယ်
သင့်တွင် Anime သို့မဟုတ် Hentai ပြaနာရှိပါကမျှော်လင့်ခြင်းကိုမစွန့်လွှတ်ပါနှင့်။ ဆက်ပြီး PornFree ကိုဆက်လုပ်ပါ။ ပြီးတော့သင့် ဦး နှောက်ကတကယ့်မိန်းမတစ်ယောက်ဘယ်လောက်လှတယ်ဆိုတာပြန်ပြီးသိလာလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ငါ forum ထဲကိုအသစ်ရောက်လာပြီး yourbrainonporn.com မှာဖော်ပြထားတဲ့ porn-induced ED ရောဂါလက္ခဏာအားလုံးနီးပါးခံစားနေရတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၉ နှစ်ရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်မျက်နှာပြင်မှသာခဲယဉ်းနိုင်သည်။ ကျွန်မမှာတစ်ခါမှလိင်မဆက်ဆံဖူး၊ ကျွန်ုပ် ၁၂ နှစ်မှ ၁၃ နှစ်အရွယ် မှစ၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခဲ့သည်။ ဤapပြီ / မေမေသည် EDs များနှင့်ပြproblemsနာများကြုံခဲ့ရပြီး၊ ငါသည်လည်းဖန်သားပြင်မှတဆင့်အမြဲတမ်းစိုက်ထူခြင်းကိုအမြဲပြောလေ့ရှိသကဲ့သို့
သို့သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည် ED-ပြproblemsနာများမစတင်မှီကကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးငယ်များနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုနှစ်သက်မိနိုင်သည်။ ဘယ်တော့မှသွားမသွားဘူး၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လိင်အကြားခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုကျွန်ုပ်အမြဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူမေထုန်ပြုခြင်း (လိင်တူဆက်ဆံသူအတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ဖူးသော်လည်း) သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်ကင်းမဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိမရှိကျွန်ုပ်တွေးမိသည်။ testosterone ဟော်မုန်းဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခု။
“ ပြားချပ်ချပ်ပြားကျောင်ခြင်း” အကြောင်းကြားလိုက်သောအခါကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ်သက်သာရာရခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်တွင်ခံစားချက်အတိုင်းအတိအကျဖြစ်သည် (တစ်ပါတ်တွင်သာညစ်ညမ်းခြင်းကိုမကြည့်ခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသေဆုံးခြင်းကဲ့သို့ခံစားရသည်) သို့သော်ကျွန်ုပ်မသေချာသေးပါ။ ငါအလားတူအတွေ့အကြုံများရှိသူတစ်စုံတစ် ဦး ကိုရှာဖွေနေသည်။
Re: အ Porn စှဲလမျးသူသို့မဟုတ်ပဲလိင်ရှုပ်ထွေး?
ဟေ့သူငယ်ချင်း ငါလိင်တူချစ်သူဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ် ၅ နှစ်အရွယ်ကတည်းကသိသည်။ မင်းက ၁၉ နှစ်မှာလိင်တူချစ်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့မထင်ဘူး။ Kinsey အတိုင်းအတာဘယ်လောက်ပဲရှိနေပါစေမင်းရဲ့ပြproblemနာက PIED နဲ့ porn ပဲ။ ဒါကြောင့်သင်ကသင့်တော်တဲ့နေရာ - ကြိုဆိုပါတယ်။ Porn သည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့အချို့သည်အချိန်မှီထွက်ခွာရန်ကြည့်ရှုရန်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာများရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ သငျသညျလိင်တူချစ်သူ porn သို့စွန့်ခဲ့ကြပေမည် - ငါခဏဖြောင့် porn သို့စွန့်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့အဲဒီနေရာကိုရောက်ဖို့မရည်ရွယ်ဘူး - reboot hardmode ကိုလုပ်ပြီး rewire လုပ်ရမယ်။ သင်ဟာမင်းပိုင်တဲ့နေရာကိုပြန်သွားပါလိမ့်မယ်။ သင်၌ပြင်းထန်သောအမှုတစ်ခုရှိသည်ဟုထင်လျှင်၎င်းသည် ၁၀၀% သို့သွားပါ။ သင်စောစောစီးစီးစတင်ခဲ့ပြီးသင်တတ်နိုင်သမျှသင်ယူပါ၊ စိတ်ရှည်ပါ။ ကံကောင်းပါစေ။ yourbrainonporn.com မှာလေ့လာပါ
ငါဟာလိင်တူဆက်ဆံသူလို့ငါထင်တယ်၊ ငါတကယ်မဖြစ်ချင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဘယ်သူ့ကိုမိန်းကလေးပဲနေပါစေငါမလိင်ဆက်ဆံချင်လို့ငါ့ကိုစွန့်ခွာသွားမှာပါ။ ကျွန်တော့်ငပဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့နေ့ကစပြီး porn မှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့တယ်။ အားလုံး porn လည်း။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီအခြေအနေမျိုးမှာတွေးဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခါမှမပေးခဲ့ဘူး။ ငါတကယ်ငါချင်တယ်မစဉ်းစားကြဘူး။ အဲဒီအချိန်ကစလို့လိင်စိတ်စူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာငါလိင်တံကိုအရက်အလွန်အကျွံစပြီးတစ်နာရီလောက်လောက်စပြီးပြောပြီးနောက် ၄ လအကြာမှာပြောပါ ဦး ။
ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး အပေါ်တစ် ဦး အရူးအမူးခဲ့ပေမယ့်ငါလိင်တူချစ်သူ porn ချက်ချင်းဆွဲဆောင်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ boromantic နေစဉ်, တသမတ်တည်းမဟုတ်ခဲ့ငါ့ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေ။ နှစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ညစ်ညမ်းမှုကကျွန်တော့်ကိုစိတ်ချမ်းသာစေတဲ့အတွက်စစ်မှန်တဲ့လူတွေအပေါ်ငါဘယ်လိုခံစားရလဲမသိဘူး။ အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကအဲဒီကောင်မလေးကကျွန်တော့်ကိုစိတ်နာကျင်အောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး၊ ငါ့အိမ်ထောင်ဖက်တွေကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုမျက်လုံးပြူးကြည့်နေတဲ့အခါငါဘာမှမခံစားရဘူး၊ နားမလည်ခဲ့ဘူး။ အရှားပါးဆုံးသောအချိန်အခါများတွင်ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ရသူတစ် ဦး အားအမြဲတမ်းဆွဲဆောင်နိုင်သော်လည်းအမြဲတမ်းမရပ်တည်ပါ။ ငါဘာကြောင့်ဒီလိုသူစိမ်းတွေကိုကြည့်ရတာကြောက်စရာကောင်းစရာကောင်းတာလဲ။ ဒါပေမယ့်တကယ်တမ်းကျတော့လူတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ကျွန်မမှာစိတ်မ ၀ င်စားမှုဟာကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဟာရက်အနည်းငယ်တိုင်းအဲဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ရှုရန်တွန်းအားတစ်ခုလိုပုံရသည်။
ငါစွဲနေသလား ဒီဟာကငါဟာငါတာ ၀ န်ရှိနေလို့လား၊ ငါ့ကိုကမ္ဘာ, Ace ဖြစ်မသွားပါစေပါနဲ့။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲ။ အကြှနျုပျ၏ဒစ်ကိုသာ porn မှတက်! အဘယ်အရာကိုမျှအစစ်အမှန်ပင်က twitch စေသည်! ငါကလူတွေကိုတောင်စိတ်မဆိုးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါဒါကိုဘယ်လိုရှာမလဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းလှုံ့ဆော်မှုကိုဖြတ်ဖို့လိုသလား။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ငါကအေ့စ်လားလား၊ ငါသာမန်ဖြစ်ချင်တယ်၊ တခြားသူတွေနဲ့တူတဲ့စစ်မှန်တဲ့လူတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံချင်တယ်။
ငါနဲ့အရမ်းဆင်တူတဲ့အခြေအနေ။ ကျွန်ုပ်ပထမ ED အတွေ့အကြုံနှင့်ပထမမိန်းကလေးနှင့်ပြိုကွဲသွားသောအခါကျွန်ုပ်သည်လိင်ခြားသူ၊ လိင်တူဆက်ဆံသူဟုထင်မြင်လာသည်။ ငါဘာအမှားအယွင်းမရှိမှန်းမသိဘူး၊ မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်၊ အဲဒါကြောင့်တစ်ချိန်ကငိုခဲ့ဖူးတယ်။ ငါကသဘာဝမရှိခံစားခဲ့ရသောအနတ္တခံစားရတယ်။
ငါသည်ငါ့ပြဿနာနှင့်ဆက်စပ်သောသတင်းအချက်အလက်ရှာနေထားရှိမည်အဖြစ်ထို့နောက်ငါ porn စွဲနှင့် NoFap အကြောင်းကိုသိခဲ့ရတယ်။ ငါမှတပါးအခြားသောအခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါစောင့်ကြည့် porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှစ်ခုလုံးတော့ဘူး။ ငါ hornier တယ်အဖြစ်ထို့နောက်ငါတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်ရှိခြင်းကိုကွောကျရှံ့သောအရာ HOCD, တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါလိင်တူချစ်သူဖြစ်အံ့သောငှါဤမျှကြောက်လန့်သဖြင့်, ငါမျက်စိ၌သူတို့ကိုကြည့်ရှုအခြားယောက်ျားနှင့်အတူစကားပြောနိုင်ဘူး။ ဒါဟာစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောခဲ့, ဒါကြောင့်ငါရံဖန်ရံခါကျွန်မမိန်းမတို့အားဆွဲဆောင်သို့မဟုတ်မမှန်လျှင်စစ်ဆေး porn watched ။ ဒါဟာကြောင့် HOCD တစ်အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှစက်ဝိုင်းခဲ့, ပြီးတော့ငါသညျကွောကျရှံ့ခွငျးကိုလျစ်လျူရှုလျှင်, ပျောက်သွားလိမ့်မယ်သိခဲ့ရတယ်။
ဒါကြောင့်ငါကဂရုမစိုက်ဘူး။ ငါကလူကိုဆွဲဆောင်တယ်ဆိုရင်အဲဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ငါသူတို့နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာဘာမှမလုပ်ဘူး။ ဒီတော့ငါကြောက်စိတ်ကိုလျစ်လျူရှုလိုက်တယ်၊
ငါမိန်းကလေးတစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့အစာရှောင်ခြင်းရှေ့ဆက်2နှစ်ပေါင်းကျနော်တို့အများကြီးထွက်စေတော်မူသည်မေတ္တာ၌ပွပျဝပျခြိနျလုံးနှိုးဆော်ခြင်း, ကြီးမားတဲ့လိင်စိတ်ခဲ့နှင့်ခိုင်ခံ့သော, ကြာရှည်ခံစိုက်ထူခဲ့ခံစားရတယ်။ ကြောင်းမီ, ငါ porn ပေါ်တက် ပေး. လကြာလုံးဝ masturbating ။
ဒါကြောင့်ငါကပုံမှန်လည်ပတ်နေသောလိင်ကွဲယောက်ျားလေးတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်လွန်ခဲ့သော ၃ လကပြန်လည်ပြန်ဖြစ်သွားသော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်အဆင်ပြေမည်ဟုကျွန်ုပ်သိသည်။ အစဉ်အမြဲ porn ပေါ်တက်အပ်ပေးတော်မူ၏။
မင်းကိုထပ်တူထပ်မျှအကြံပေးပါ၊ သံသရာကိုဖြတ်လိုက်ရုံနဲ့၊ ၃ လလောက်မကြည့်ပါနဲ့၊ လုံးဝမကြည့်ပါနဲ့။ သင်၏စိတ်ကိုမယုံပါနှင့်။ သင်သည် asexual ဖြစ်ခြင်းကိုကြောက်လျှင်သင်မဟုတ်ပါ။ စစ်မှန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့်အတူအဆင်ပြေဖြစ်ကြသည်။
Hmmm … .although ငါဒီခံစားချက်အတိုင်းခံစားခဲ့ရတူညီတဲ့အတိုင်းအတာအထိကျွန်တော်မခံစားရတော့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားတွေအကြားစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုအပေါ်ငါလုံးဝဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ငါလိင်တူချစ်သူစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့် porn အပေါ်စတင်တူညီသောလမ်းဖြစ်၏, ငါ့ကိုအဘို့ငါသော်လည်းစစ်မှန်သောဘဝ၌သာမိန်းကလေးများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်, နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလှည့်သင့်ရဲ့ခေါင်းကိုလမ်းအတွက်ငါနေဆဲအဓိကအားနေ့စဉ်ဘဝ၌အမျိုးသမီးမှဆွဲဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ငါတကယ်တော့နောက်ပိုင်းမှာ shemale porn တွေ့ရှိခဲ့နှင့်အစစ်အမှန်ဘဝ၌ TS မိန်းကလေးများနှင့်ရှာဖွေသူများအကြားနှင့်အပေးအယူတစ်နည်းနည်းခဲ့ကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်
ts မိန်းကလေးများသည်အလွန်အမင်းလှည့်စားခံရသော်လည်းကျွန်ုပ်မတက်နိုင်သည့်တစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်ပထမဆုံးအကြိမ်ချိတ်ဆက်မိလိုက်သည်ကထူးဆန်းနေပုံရသည်၊ သို့သော်ဖြစ်ပျက်နေသည်။ ဒါပေမယ့်ငါနောက်ပိုင်းမှာတော့အဆင်ပြေလာတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော့်ကိုတကယ့်ကိုအခြေခံတဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်မရှိခဲ့ဘူး၊ ငါကြည့်ခဲ့တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာပဲဆိုတာသိခဲ့တာပါ။ ဘဝမှာလိင်စပြုလာတဲ့နောက်မှာတော့လိင်ဆိုင်ရာအဟောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အများပြည်သူနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်သူတို့အကြောင်းစိတ်ကူး။
ငါထင်တာကအတွေ့အကြုံကကြီးမားတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲ။ မင်းမှာမင်းကိုတကယ်လိင်ဆက်ဆံမှုသိပ်မရှိခဲ့ရင်မင်းဘယ်မှာလဲဆိုတာသဘောပေါက်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းကလိင်တူချင်းချစ်တာကိုမုန်းတယ်၊ ငါကလိင်တူဆက်ဆံတာဟာမင်းကိုညစ်ညမ်းရုပ်တောင်မကြိုက်ဘူးလို့ဆိုလိုတာလို့အမြဲတမ်းယူဆခဲ့တယ်။
ငါအလားတူပြဿနာရှိခဲ့ပါပြီ။ တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါတုံ့ပြန်မှုကိုဖတ်, ဒါပေမယ့်ငါ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအကြောင်းသင့်ပြောပြပါရစေခဲ့ပါဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သုံးနှစ်ကနေသုံးနှစ်ခွဲကာလအတွင်းမှာ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ခြင်းမှလာသောပြissuesနာများကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့သည်။ warrior0306 ကရှင်းပြသလိုပဲအဲဒီတုန်းကငါမှာလည်း HOCD ပြproblemsနာတွေရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းမသေချာမရေရာသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏လိင်မှုသည်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းမသေချာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါမှာလိင်တူမေထုန်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်သည်ဟုခံစားခဲ့ရပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာလိင်တူချစ်သူဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလက်ခံဖို့သင်ယူခဲ့တယ်၊
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ထိုအချိန်ကတည်းကကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်စာပေများကိုစွန့်လွှတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်းတစ်ရာကျော်အကြာတွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကင်းစင်စွာနေထိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးသင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်သည်သုံးလကြာမြင့်ချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။
ဒီအချိန်မှာငါလိင်တူဆက်ဆံသူဖြစ်မဖြစ်နှင့်ပတ်သက်။ ငါ၏အမလုံခြုံမှုအများစုအနိုင်ယူ။ ကျွန်ုပ်၏နိဂုံးချုပ်မှာကျွန်ုပ်သည်လိင်တူမေထုန်မဟုတ်သူဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ်မတ်ရှိမနေအမြဲမသေချာပါ။
ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်ကုသမှုသည်အမျိုးသမီးများအားအမြဲတမ်းအာရုံစိုက်သည်။ ကျွန်မရဲ့ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနေ့ရက်အများစုအတွက်မိန်းမတွေကိုကြည့်ချင်တဲ့အတွက်ယောက်ျားတွေမှာရှိတဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုကြည့်ရတာမကြိုက်ဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောကြည့်ရှုသည့်နေ့များ၌မိန်းမများကိုကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝင်စားမှုမှာပိတ်ပင်တားဆီးမှုများရှိနေသည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည် porn ကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှု။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်အပေါ်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်မားသည့်အချိန်များရှိခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောခံစားချက်ရှိခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါလုံးဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားခဲ့ရနှင့်ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခဲ့ဖြစ်စေမနှင့်ပတ်သက်။ မသေချာခံစားခဲ့ရသည့်ကာလလည်းရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အပြည့်အ ၀ မသေချာသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်များကကျွန်ုပ်သည်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်သောလိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။
asexuality ကိုလေ့လာရာမှာ asexual sprectrum နဲ့ကိုက်ညီတဲ့တံဆိပ်တစ်ဒါဇင်နီးပါးရှိတယ်ဆိုတာကိုငါတွေ့ပြီ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှုများရှိသည်။ တစ် ဦး - အချစ်ဇာတ်လမ်း၊ သရုပ်ဆောင်ချစ်သူများ၊ Homo-romantic၊ bi-romantic နှင့် hetero-romantic နေသောလူများလည်းရှိသည်။ ပြီးတော့ကျား၊ မရေးရာလက္ခဏာတွေအရည်အချင်းရှိတဲ့လူတွေကိုလျစ်လျူရှုမိတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိင်မှုကိစ္စနဲ့ကျားမခွဲခြားမှုနယ်ပယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပ်မသိဘူး။
ဒီရှည်လျားဇာတ်လမ်းအဘို့တောင်းပန်ပါတယ်သို့သော်အဘယ်သို့ဆင်းမှကြွလာတော်မူသည်။ မင်းရဲ့လိင်မှုကိစ္စကိုမင်းတို့မပြောနိုင်ဘူး။ ဒီအကြောင်းတွေသင်ယူနိုင်တဲ့သူကမင်းပဲ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့သောပုံပြင်များကသင်၏အပြုအမူနှင့်အတွေးအမြင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကိုနားလည်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
သင်လိင်မတူသူ၊ လိင်နှစ်မျိုး၊ လိင်တူဆက်ဆံသူ၊ သင်လိင်မတူသူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သင်ကမီးခိုးရောင် - လိင် (သို့) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံသူဖြစ်မယ် (သင်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာမသိရင်ကြည့်ပါ) ။ သင်သည်လိင်ကိုမလိုချင်၊ သို့သော်စိတ်ကူးယဉ်လိုသည်။ သင်လိင်မလိုချင်သော်လည်းဖြစ်နိုင်သည် (အမျိုးသမီးတစ် ဦး သို့မဟုတ်အမျိုးသားတစ် ဦး နှင့်ဖြစ်စေ) အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလိုချင်သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် porn ဖြတ်နှင့်သင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကန့်သတ်သင့်ဦးနှောက်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနှင့်သင့်အစစ်အမှန်လိင်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုလုပျနိုငျကိုအကောင်းဆုံးအရာပါပဲ။ ဒါဟာသင်အဖြေကိုရဖို့မတိုင်မီအချိန်အနည်းငယ်ကြာပေမယ့်သင့်ရဲ့အခွအေနေကိုလက်မခံခြင်းနှင့်ဤအရပ်မှတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မည်။
ဘ ၀ ဟာသင်ခွင့်ပြုသလောက်လှပနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်သောဘဝရရှိရန်အတွက်သင်သည်လိင်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး (သို့မဟုတ်တန်ဖိုးရှိသည့်ငွေများ) ကိုမလိုအပ်ပါ။ သင်နှစ်သက်သောအရာများကိုလုပ်ရန်သာလိုသည်။
ပါတယ်သောသူတို့သည်အဘယ်သို့သောသူတို့ကိုသင်ယူဖို့ပြန်လည်နာလန်ထူ Self-အစီရင်ခံစာများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ Browse ပြန်လည်ကောင်းမွန် porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ထံမှကြုံတွေ့ကြပြီ ပြန်ဖွင့် Accounts ကို 's Page 1, ပြန်ဖွင့် Accounts ကို 's Page2နှင့် ပြန်ဖွင့် Accounts ကိုစာမျက်နှာ 3။ ထို့ပြင်အောက်ပါရှစ်စာမျက်နှာများတွင်ဖော်ပြတိုတောင်းပုံပြင်များဆံ့ နာလန်ထူ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ထံမှ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.